प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो कार्यकाललाई इतिहासमा सम्झिनलायक बनाउनबाट किन चुक्दै छन् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो कार्यकाललाई इतिहासमा सम्झिनलायक बनाउनबाट किन चुक्दै छन् ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अहिले न्याय परिषदको बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र न्याय परिषदको संरचना फेरबदलका कारण उनलाई बैठक बोलाएर निर्णय गराउन सकस भएको पनि हुन सक्छ
२०७८ भाद्र २६, शनिबार १५:४०:००
काठमाडौँ । तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको सहरजिस्ट्रार छँदा नृपध्वज निरौला शाखा अधिकृत थिए । तिनै श्रेष्ठ उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै बल्लतल्ल मुख्य न्यायाधीश भएका छन् । तर, उनले यस अवधिमा काठमाडौँ उपत्यका देख्न पाएका छैनन् ।
निरौला भने सहरजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएका छन् । मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिपछि केही समय दिपायल गए पनि लगत्तै पाटन उच्च अदालत सरुवा भएका छन् । विगत पाँच महिनादेखि उनी पाटनमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
उच्च अदालतमा निरौलाभन्दा धेरै वरिष्ठ न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरु भए पनि उनीहरुलाई उपत्यका प्रवेश गर्ने मौका नै दिइएको छैन । बरु वरिष्ठलाई चार भन्ज्याङ कटाएर दुर्गम र सुविधाविहीन क्षेत्रमा पठाएर कनिष्ठ निरौलालाई अस्वाभाविक रुपमा विशेष सुविधा र सहुलियतका साथ राखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अहिले न्याय परिषदको बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र न्याय परिषदको संरचना फेरबदलका कारण उनलाई बैठक बोलाएर निर्णय गराउन सकस भएको पनि हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा भने काज सरुवाका निर्णय जुनसुकै बखत गर्न सक्छन्, गर्दै आएका पनि छन् । तर, निरौलाका हकमा निकै ठूलो अवगाल सहेर पाटनमा थमौती गरिरहेका छन् ।
जबकि, निरौलाको कार्यशैली न्यायाधीश अनुकूल नरहेको भनी विभिन्न माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश राणा र न्याय परिषदका अन्य पदाधिकारीसमक्ष गुनासा र उजुरीहरु पुगेको धेरै भइसकेको छ । यति धेरै गुनासा र उजुरीको बेवास्ता गरी यति ठूलो अवगाल सहेर निरौलालाई पाटनमा राखिरहनुपर्ने कारण के होला ? प्रधानन्यायाधीशलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलागेको हो ? बडो आश्चर्य र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
न्यायाधीशहरुको सरुवा समयमा नहुँदा र अहिले भएको खटनपटन निकै अन्यायपूर्ण तथा असन्तुलित रहेकाले अविलम्ब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यारम्भ हुनुअघि अदालतको स्रोतसाधनको उचित हेरफेर गर्ने परम्परा पनि हो । यी दुवै अवस्थाप्रति नजरअन्दाज गरी प्रधानन्यायाधीश मौन बसिदिँदा न्याय क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि र आलश्यले डेरा जमाएको छ । यसको असर न्यायिक कामकारवाही र कार्य सम्पादनमा परिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं पनि न्याय सेवाका अन्तिम दिनगन्तीमा छन् । यसबेला उनले जतिसक्दो चाँडो विवादरहित ढंगले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । न्याय क्षेत्रमा व्याप्त गुनासाको अपेक्षित सुनुवाइ र सम्बोधनमा नतिजामुखी पहल गर्नुपर्ने हो । तर, उनको ध्यान यसतर्फ जाँदै गएको छैन । यसले न्याय क्षेत्रलाई नै विवाद र आशंकाको घेरामा पारेको छ । जसको असर न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासमा परेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनास्था गिर्दो अवस्थामा रहनु न्यायिक नेतृत्वको असफलता हो । के एक असफल प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राणा घर जान चाहन्छन् ? यो प्रश्नतिर पनि उनले विशेष रुपमा विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा जेजस्ता कामकारवाही गरे पनि अझै पनि न्यायिक इतिहासमा आफ्नो कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउने अवसर छ । त्यसका निम्ति उनी स्वयं निष्पक्ष र निर्भीक रुपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावमा नरही, कसैप्रति विशेष लगाव वा झुकाव नराखी काम गर्ने हो भने अझै पनि उनले इतिहास रच्ने अवसर छ । त्यसका निम्ति न्यायाधीशको खटनपटनलाई वस्तुनिष्ठ, औचित्यपूर्ण र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सक्नुपर्छ । कसैलाई आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा र सहुलियत, कसैप्रति चरम बेवास्ता र उपेक्षा गर्ने हो भने न्यायपालिकाभित्रै न्याय मर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा शोषित, पीडित जनतालाई यस संस्थाले कसरी न्याय दिन सक्छ ?